सीमा विवादमा रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न : भाषण गर्दै हिँड्ने कि राजदूत बोलाएर सोध्ने ? - Parichay Network
सीमा विवादमा रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न : भाषण गर्दै हिँड्ने कि राजदूत बोलाएर सोध्ने ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 १ मंसिर २०७६, आईतवार १०:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । रामकुमारी झाँक्री सत्तारुढ नेकपाभित्रकी प्रतिपक्षी नेता हुन् । संसद् र सडकमा सरकारको आलोचना गर्ने उनी नेकपाभित्रकी प्रभावशाली नेतृ मानिन्छिन् । सीमा विवादका बारे सरकारले गरेको कामकारबाहीप्रति उनले आपत्ति जनाएकी छन् । सरकारले सीमा विवादमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा भाषण मात्रै गरेर हिँडेको उनको आरोप छ ।
सांसद झाँक्रीले भारतले सीमा मिचेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल नगरी मन्त्रीहरूले भाषण गर्दै हिँडेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । सांसद झाँक्रीले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको आलोचना गरेकी हुन् । उनले मन्त्रीलाई भाषण दिनुभन्दा कूटनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिएकी छन् । उनले राजदूत बोलाएर सोध्न पनि चुनौती दिएकी छन् ।
‘सीमाबारे सरकारका मन्त्रीले भाषण गर्दै हिँड्ने कि त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर सोध्ने? वक्तव्य निकाल्ने की? मन्त्रिपरिषदले तुरून्त आफ्नो राजदूतमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने?’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘कूटनीतिक पहल गर्न आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने? वा हामी हाम्रो भूमि एक इन्च पनि मिच्न दिन्नौँ भन्ने बेतुकको भाषण दिने?’